Qeybtii Todobaad ‘Adeer Qalanjo Heli MaySide Ka QuuSo’ Qiso Cajiib Ah & Qalinkii WaaSuge.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Qeybtii Todobaad ‘Adeer Qalanjo Heli MaySide Ka QuuSo’ Qiso Cajiib Ah & Qalinkii WaaSuge..
Published: April 28, 2014, 9:45 am
| Updated: April 28, 2014 12:33 pm
Billoowga Qeybta Todoaad.
La SoCo Adeer Cilmi Iyo Nadar Oo Fool Ka Fool U Kulmaaya’ Waxa aay inoo mareysay nadar oo aragtida adeer cilmi ka naxday isla jareysay. La SoCo Qeybta Lixaad Ee Sheekada: Nadar waxay aamusnaato oo kuurto aadna u fiiriso adeer cilmi ugu danbeyntii way la hadashay oo salaantay waydsiisay xaaladiisa caafimaad iyo dhamaan Qoyska.? Adeer ayaa soo jawaab koobey yidhi waa nabad.
Nadar maskaxdeeda ayeey mashquulisey waxay isku dayeeysaa inay soo saarto isla markaana tix raac ku sameyso sababta ka danbeysa in adeer halkaan ku balamiyo.? Jawaabta ugu muhiimsan ee maankeedu keeney waxa aay noqotay inuu doonayo adeer cilmi xalinta qalaafaadka ka dhaxeeya ayada iyo faarax balse sidaa ma noqon.
Waa la yara dhaqaaqey oo la fariistey meel lagu qaxweeyo waxaana la bilaabay is xaal wareysi guud iyo mid gaar ahaanba, adeer cilmi waxa laga dareemayaa fir fircooni ka duwan tii maalinkii marti qaadka, mar walba uu hadalo ama nadar u jawaabtana waxa uu ku laraaa dhoolo cadeys asagoo mar walba u jan jeeriya jawiga mid farxad badan. Halkii aay nadar fileysay in diiwaanka laga dhigo ee aheed soo hadal qaadida arintii xariirikii dhantaalmay cidu ma aadin ee wado cusub ayaa la qardado jeexdey adeer waxuuna inta badal isticmaalaya sarbeed iyo su,aalo maldana kana wayn maskaxda nadar laakin ku beera saamayn, ugu danbeeytiina adeer waxuu ku yidhi waxaan raba ama doonayaa inaan waqti badan kula qaato hadii aad iga ogolaanayso nadareey.? Nadar oo marna yaaban marna yeel is dhahda ayaa ku jawaab celisey waayahay adeer dhib malaha mar walba oo aad ii yeerto kaama dhaga adeegi doono insha Allah waa tix galinayaa dhamaan codsigaada, mar walba madaxa ayaad ii saran tahay adeer. Jawaabta aay baxisey nadar waxa aay leedahay laba macno oo kale ah 1:In nadar tahay qabaar mooge wali aaminsan adeernimadii hore diidana in laga turjuma xumaan iyo hadalo aan wanaagsanayn.2:Adeer oo jawaabta nadar ula dhacay si wanaagsan aadna u fududeeystay shaqada faraha badan ee u taalo iyo soo xero galinteeda, si kastaba waan usoo joogi doonaa halka aay cagta saarto arintaani. Waxaa soo idlaadey kulankii ugu horeeyey ee dhax mara adeer cilmi iyo nadar waxuuna kusoo gaba gaboobey jawi degan iyo rajo wanaagsan, nadar waxaa laga codsaday in la soo dhaweeyo xaafadana lagu sii tuuro oo aay gaariga soo raacdo.
In kasta oo aaysan xiiso u qabin gaari la raaco hadana way aqbashay oo soo gashay gudaha, markii gaarigii dhaqaaqayna waxaa loo daaray ‘HEES’ aad u macaan kana turjumeeysa laba qofood ee haatan isu saadaal maqan waliba wehliyaan hadalo. ! Xaafada ayaa la keeney markii aay gaariga ka dagaysanayna waxaa lagu yidhi waa hubaal inaan kuu xiisi doono Nadar, macsalaamo waa inoo kulan danbe Qaali. Tallow maxaa xigi doono aas aaska iyo biloowga wada hadalada haatan curtay. Waa inoo isbuuca xiga intii ka horeeysana saaxibayaal sidaas iyo nabad galyo.
« Warbixinta Ka HoreysayDaawo Video: Dhacdo naxdin iyo murugo leh oo ka dhacday Dalka Mareykanka ka dib markii gabar Soomaali ah ay…	Warbixinta Xigto »DAAWO VIDEO:-Gabar Hooyadeed Aragtay Iyadoo Sawiro Qawan facebook galinaysa,Kadib maxay Ku samaysay	Leave a Reply Cancel reply